Single ဆိုရင် ဖတ်ပါလေ - Akhayar Lifestyle
Single ဆိုရင် ဖတ်ပါလေ
27 Jan 2017 . 10:48 AM
တကယ်တော့ Singleဆိုတာ ခက်ခဲလှတဲ့ ပျော်စရာကောင်းလှတဲ့ လောကစည်းစိမ်ကို ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖြတ်သန်းနေကြတာပါ။ သွားချင်တဲ့နေရာကို ဘယ်သူ့မှခွင့်တောင်းစရာမလိုတဲ့ Single ဘဝကို ဘာဖြစ်လို့ ဝင်ရောက်ကြတာလဲဆိုတာ Single အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကို စစ်တမ်းကောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ . . ။
တချို့ Single တွေကျတော့ Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်၊ Viber မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရင် ဖွန်ကြောင်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ရည်းစားမထားချင်ဘူး။ သူ့အနေနဲ့ ရည်းစားထားဖို့ထက် အီစီကလီပြောရတာကို ပိုအားသန်လို့ပါ။ ဒီလို Single တွေကတော့ ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။
သူကတော့ ဘာမှနားမလည်ခင်က ရည်းစားတွေ ထားခဲ့ဖူးတယ်။ နားလည်လာတော့ အချစ်မပါတဲ့ Relationship တစ်ခုကို ဆက်မတွဲချင်တော့ဘူးလို့ ခံယူပြီး တစ်ယောက်တည်းအေးဆေးနေတော့တာ။ ဒီလို Single က အချစ်စစ်ကို စောင့်နေတဲ့ Single ဗျ။ တချို့တွေကလည်း ဘွဲ့မရသေးရင်၊ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်မရောက်သေးရင် ရည်းစားသနာမထားချင်တဲ့သဘောပါ။ ရည်မှန်းချက်ကြီးတာလား ဘာလားတော့မသိ။
ဒီ Single ဘဝကတော့ သနားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလို့ ချိန်မယ်ကြံခါရှိသေး၊ တခြားသူနောက် ကောင်မလေးက ပါသွားပြီ။ အာ့ကြောင့် သူ့ကို “ချိန်ပါ” လို့ခေါ်တယ်။ ချိန်လိုက်တိုင်း ပါသွားလိုက် လုံးလည်လိုက်နေရင်းနဲ့ Single ဘဝမှာ သောင်တင်နေတာပေါ့။
ပိုးဟပ်ကတော့ ချိန်ပါထက် နည်းနည်းမြင့်တယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်မလေးကို အမှန်အကန်လိုက်နေပြီ၊ ကောင်မလေးနဲ့ ညဘက်ဆို ဖုန်းတွေပြောလိုက်၊ အပြင်မှာ မုန့်ထွက်စားလိုက်နဲ့ ကိုယ်ပိုးနေတုန်းမှာ တခြားတစ်ကောင်က ဟပ်သွားလို့ သူ့ကို ပိုးဟပ်လို့ခေါ်တာ။ ပိုးလိုက်တိုင်း အဟပ်ခံလိုက်ရတိုင်းနဲ့ Single ဖြစ်နေတာ။
You May Like : သမီးရည်းစားတွေအတွက် ရန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးများ
ဒီလိုကောင်တွေက Single ဘဝသာ ရောက်နေတာ ခေသူမဟုတ်ဖူး။ ဓာတ်တိုင်ကိုတောင် ထဘီဝတ်ပေးရင် တောင့်တယ်ဖြောင့်တယ်ပြောကြတဲ့ ငယ်ဖြူနှာပူးတွေပါ။ သူတို့က နားပူမခံချင်လို့ အပြင်မှာ ရည်းစားမထားဘူး၊ ပိုက်ဆံသိန်း ၃ဝရှိရင် စီလီကွန်ရုပ်ပဲ ဝယ်မယ့်သဘော။ ပန်းဆယ်မျိုးမှာမပါတဲ့ လက်သမားတွေပေါ့ဗျာ။
“အပျိုကြီး . . . တကယ်လုပ်မှာလား ပြောစမ်းပါ၊ ရည်ရွယ်တဲ့ မင်းအကြောင်းကို တကယ်လို့မင်းနဲ့ မပေါင်းဖြစ်ရင်တော့ အားကျမခံ လူပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလိုပဲ တကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ကွဲခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်သစ်မရှာချင်တာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းအေးဆေးနေတော့တာပါ။
၇။ FA စစ်စစ်
ဗြဟ္မာ့ပြည်က ဆင်းလာတဲ့ FA စစ်စစ်သမားတွေက Single အသိုင်းအဝိုင်းမှာဆိုရင် ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးလူတန်းစားပါ။ မိဘတွေက ဘယ်လိုပဲတိုက်တွန်းပါစေဦး၊ FA သမားတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ကို မရတာ။ FA သမားတွေဆိုတာက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်တောင် စမူဆာကို မစားဘဲနဲ့ အီကြာကွေးကိုပဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့လူမျိုး။
Single တွေကိုတော့ အသေးစိတ်အမျိုးအစားခွဲပြီး ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကဲ . . စာဖတ်သူတွေကလည်း ရည်းစားမရှိတဲ့ Single ဘဝဆိုရင် ဘယ်နံပါတ်မှာပါလဲဆိုတာ Comment မှာရေးထားခဲ့ပါဦး။